Falaqeyn Kulamada Champion league ah Caawo dhacaya | Warfaafiye
Warfaafiye Arrimaha Bulashada	Falaqeyn Kulamada Champion league ah Caawo dhacaya
(Sports News) Waxaa caawo balan san kooxaha ku jira Gurubyada E,F,G,H kuwaas oo kulmaya kulankoodii ugu danbeeyay ee Gurubyada laga soo baxi lahaa waxna Gurubka E uu yahay mid la isku dhegan yahay Kooxha Juventus iyo Chelsea ku loolamayan.
Guuldaradii Chelsea ee 3-0 ee ka soo gaartay Juventus kulankii ugu danbeeyay ee wareega Group-yada ayaa waxa ay keentay in Roberto Di Matteo uu ku waayo shaqadiisa, inkastoo bishii May ee sannadkan uu kooxda ku hogaamiyay hanshada Champions League ka dib markii la ceyriyay Andre Villas-Boas.
Kooxda Chelsea ayaa khasab ku tahay in aay badiso halka Juventus iyo Shakhtar oo kalinta kowaad u muuqata mid ku soo baxday hadii bar baro gasho kulan kaa kulmayaan waaxna Kooxda Chelsea jaaniskeeda yahay hadii juventus laga badiyo iyana aay badiso .
Juventus ayaa dhanka kale u jiheysaneysa Ukraine iyagoo isbuucaan 3-0 kaga badiyay kooxda ay isku magaalada yihiin ee Torino horyaalka Serie A waxna ahdi juventus soo baxda chelsea noqon doontaa Kooxdii ugu horaysay ee ee difaacaneysa Champions League ee ku harta wareega group-yada.
Wxaa sido akle ciyaaraya Kooxaha Bayern Munich iyo Valencia ayaa mar hore sii xaqiijistay u gudbintaankooda wareega xiga ee 16ka ee Champions League halka isla gurubkaa ku dagaalami doonaan Kooxada BATE Borisov oo rajo weyn ka leh inay xaqiijisato booskeeda Europa League.
Barcelona ayaa goor hore sii xaqiijisatay inay ku soo baxday kaalinta koowaad ee group-ka, laakiin kooxdii soo labeyn laheyd ayaa caawa la go’aansan doonaa waxana balan san Kooxda Benfica waxa ay caawa marti u tahay Barcelona .
Manchester United ayaa goor hore sii xaqiijisatay inay ku soo baxday kaalinta 1aad ee group-kaan, waxaana sida Group G oo kale la isku heystaa caawa kooxdii soo labeyn laheyd waxana la sugayaa waa kooxda kalainta labaad ku soo baxda .